Pakistana: Bilaogin’ny Fanehoankevitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2018 19:37 GMT
Amin'izao fotoana izao, efa fantatry ny rehetra tsara ny adihevitra nateraky ny famoahana sariitatra maneho ny Mpaminany Mahomet, sy ireo hetsipanoherana manerana ny tany nanaraka izany.
Amin'ny maha Silamo ny tenako, mandeha ho azy ny fahitako ireo sariitatra ireo ho manafintohina, noho izany tsy dia misy mahagaga loatra. Kanefa takatro ihany koa sy tohanako ny ‘fahalalahana maneho hevitra’, ary azoko an-tsaina fa tsy azo eritreretina ny manantena ny fanarahan'ny rehetra ny lalàna tsy voasoratra momba ny fitondrantenan'ny olombelona sy ny tsy hanalany baraka ny finoan'ny olona iray na ny rafi-pinoany. Heveriko ihany koa fa tsy manome endrika tsara ny haranitan-tsain'izay nanao azy izy io, rehefa manapa-kevitra ny haneso finoana iray manontolo izy noho ny fankahalàny ireo mpanaraka sasany mahery fihetsika an'io finoana io. Saingy fijeriko manokana izay.
Tena tsapako ihany koa fa tokony hoferana amin'ny adihevitra am-bava na an-tsoratra ny fanoherana ny fanambaniana ny finoan'ny olona tahaka izao, fa tsy amin'ny famakiana varavarankely, fandorana sainampirenena, sary na trano. Saingy e, fijeriko manokana izay.
Nanohitra aho, tamin'ny fomba iray hany hitako fa mitombina ary nampiharako ny ‘fahalalahako maneho hevitra’, ary nanao toy izany ihany koa ireo bilaogera Pakistaney maro, ny sasany amin-dry zareo voatonona eto ambany:
Mitsikera ny fanehoankevitra ao Angletera i Suspect Paki; manazava ilay trangan-javatra sy ireo sariitatra voaresaka ireo i Teeth Maestro; manolotra ny fomba fijeriny manokana i Journey; manoratra amin'ny antsipiriany ny valinteniny mandratra sy feno hatezerana (pejy voafafa) i Fahd Mirza; ary maneho ny hevitro momba ny lahatenin'ny Praiminisitra aho.
Tiako faranana aminà resaka iray tena tsy mety vita avy amin'ilay mpanoratra, Salman Rushdie, ny fananarako. Nanoratra boky iray antsoina hoe Andininy Satanika izy, izay niteraka adihevitra rehefa nivoaka, satria Silamo maro no nandray azy io ho faniratsiràna. Taitra tamin'ny fanehoankevitra mahery setra (fandrahonana ho faty – famoahan'ireo mahery setra fatwa ho an'i Rushdie) manoloana ilay boky i Rushdie ary nino fa nanana zo hanao izany satria io no ‘fahalalahany maneho ny heviny sy miteny’, ary tokony hitony fotsiny ny olona.
Taona maro taty aoriana, nisy mpanao gazety iray nitsikera ny vadin'i Rushdie izay niteraka resabe rehefa nivoaka, satria noraisin'i Rushdie ho fanaovana tsinontsinona izany. Taitra tamin'io fanehoankevitra mahery setra (fandrahonana ho faty – ny fanomezan'i Rushdie toky fa hidaroka ilay mpanao gazety amin'ny kibay) manoloana io lahatsoratra io ilay mpanao gazety ary nino fa nanana zo hanao izany satria io no ‘fahalalahany maneho ny heviny sy miteny’ ary tokony hitony fotsiny i Rushdie.
Araka izany, inona no lesona azontsika tsoahina amin'ity tantara ity. Na heverinao ho kanto sy lalin-tsaina toy ny inona aza ny asanao, raha manala baraka ny zavatra na ny olona tian'ny hafa, hajainy na heveriny fa masina, ianao (ny Mpaminany ho an'ny Silamo, ny vadiny ho an'i Rushdie), tsy maintsy hahazo valinteny feno hatezerana ianao, ka aza gaga.